Hevitra momba ny datin'ny Kildare misy fahasamihafana - IntoKildare
mpivady, Vatosoa miafina, Zavatra tokony hatao
Ny sakafo hariva misy labozia, raozy mena tokana, balaonina miendrika fo - teo, nanao an'izany! Maninona raha mba mankalaza kely ny Fetin'ny mpifankatia amin'ity taona ity, miaraka amin'ireto sosokevitra ireto avy ao amin'ny Into Kildare.
Raiso Arty Ity Andro-V ity
Mitady zavatra hafa tanteraka hanamarihana ity fotoam-pitiavana ity? Mampahafantatra Paint Club ao amin'ny Carton House! Hetsika iray tsy manam-paharoa sy mamorona, ny Paint Club dia hatao ao amin'ny Manor House of Carton miaraka amina mpanao hosodoko maoderina hanampy anao hamorona sangan'asa tena manokana.
Paint Club dia natao ho an'ny rehetra, tsy misy traikefa tena ilaina! Ny zavatra rehetra dia homena, canvas, loko, savily, borosy, apron, ny tenanao sy ny hafanam-po be dia be no ilainao!
Na mpanakanto efa niorina ianao na mpiorina tanteraka dia alao ny famoronana ao anaty ary mifalifaly amin'ny Paint Club ao amin'ny Carton House.
Ho an'ireo mpivady any ivelany
Lahatsoratra iray nozarain'i Abbeyfield Farm (@abbeyfieldfarm)
Inona no atao hoe romantika kokoa noho ny mivoaka amin'ny rivotra madio any ambanivohitra Kildare ambanivohitra ary mankafy ny tsara tarehy eny ivelany?
Tsarovy isan'andro ny malalanao ao amin'ny Abbeyfields Country Pursuits amin'ny alàlan'ny fitifirana voromailala tanimanga, basy vita amin'ny rivotra, zana-tsipìka ary foibe mpitaingina vady. Mikarakara fety kely manomboka amin'ny olona roa ka hatramin'ny fito, ity no Valentine tonga lafatra ho an'ireo mpivady any ivelany mitady daty misy fahasamihafana.
Any amin'ny velarantanin'i Kildare tsara tarehy 240 hektara i Abbeyfield dia latsaky ny 20 minitra avy eo D50's MXNUMX.
Ento mankany amin'ny rano miaraka amin'ny olon-tianao
Lahatsoratra zarain'i Ger Loughlin (@bargetrip)
Inona no atao tantaram-pitiavana kokoa noho ny dia sambo milamina misamboaravoara amin'ny lakandranon'i Kildare?
Avelao any aoriana ny sisa amin'izao tontolo izao rehefa miondrana amin'ny sambofiara ianao ary mitondra ny mangina amin'ny rano mandalo voajanahary mahafinaritra eny amoron'ny lakandrano.
Fitsangatsanganana an-tsokosoko manokana an'ny bargetrip.ie manamorona ny lakandrano, miaraka amin'ny champagne sy dite atoandro, miaraka amin'ny sandwich, scones, mofomamy malefaka ary dite. Mafana sy ahazoana aina ilay sambofiara amin'ny fatana mirehitra kitay, mozika malefaka ao ambadika ary ireo biriky ivelany raha te hivoaka any ivelany ianao.
Mandehana mihazakazaka manodidina ity Andro V ity
Lahatsoratra iray nozarain'i Irish National Stud & Gardens (@irishnationalstudandgardens)
Asehoy ny fotoana lehibe amin'ny daty misy anao amin'ny dia any amin'ny National National Stud and Gardens. Tsy misy fotoana tsara kokoa noho izao dia izao hitsidihana satria ny Stud vao nosokafana ho an'ny taona 2019, ary nofenoina alika vao teraka vao teraka mba hivaingana!
Mandehana mitsangatsangana mamakivaky ny zaridaina Japoney ary mankafy ny Living Legends izay miantso ny landy irlandey Stud.
Ny Japanese Gardens Restaurant dia toerana mety indrindra hankafizana sakafo antoandro akaiky sy milamina ho an'ny roa, miaraka amin'ny sakafo tsotra sy mahasalama miaraka amin'ny fanamafisana ny mahavelombelona sy ny tsiro.
Ho an'ireo tia biby
Lahatsoratra iray nozarain'i Kildare Farm Shop & Open Farm (@kildarefarmfoods)
Raha adala ny sakaizanao feno volo ny mpifankatia dia mankanisa ao amin'ny bokin'izy ireo tsara ary alamino daty ho an'ny Kildare Farm Foods amin'ity 14 Febroary ity!
Feno biby mifamaly, lehibe sy kely, Kildare Farm Foods no daty feno fahafinaretana feno ho an'ireo mpivady mitady fialan-tsasatra sy fialamboly mora. Ao amin'ny toeram-piompiana dia ahitanao wallabies, ostriches, alpacas, mara, kisoa, osy, pony, serfa, ondry ary maro hafa!
Aza adino ny fisakafoanana mahafinaritra sy divay lafo vidy, maninona raha mankafy sakafo atoandro matsiro ao amin'ny Tractor Cafe!
Ny fanomezana ny hafainganana
Lahatsoratra iray nozarain'i Mondello Park (@mondellopark)
Omeo fetin'ny mpifankatia izy hahatsiarovany amin'ity taona ity amin'ny dia mankany Mondello Park! Ny sehatra motorsport iraisam-pirenena dia mamela anao hamandrika traikefa amin'ny hazakaza-tsoavaly amin'ny supercar ho an'ny olon-tianao - fanomezana azo antoka fa handresy anao ny Partner Of The Year Award!
Raha aleonao mipetrapetraka sy mijery, Mondello Park dia mampiantrano ny Spring Break Bash Party amin'ny 16 sy 17 feb
Roa andro tsy tapaka ny zotra, fizarana efatra tsy misy dikany, ny fifaninanana fahazoan-dàlana ho an'ny National Drift Games 2019, ny fiaran'ny fiara Drift Games Extreme, ny fandehanan'ny mpandeha ary ny fihetsiketsehana lavitra noho izay zakan'ny olombelona ara-dalàna - azo antoka fa io no daty tsara indrindra amin'ny Andro V. NA IZAO ho an'ity olona tia fiara ity amin'ny fiainanao.
Mifandraisa amin'ny natiora
Lahatsoratra iray nozarain'i Lullymore (@lullymoreheritagepark)
Notohanan'ny Failte Ireland sy ny faritra atsinanan'i Irlandy, Lullymore Heritage Park dia safidy tokana sy mahafinaritra hitondrana olona manokana anao amin'ity Fetin'ny mpifankatia ity!
Jereo ny tantaran'ny Lullymore taloha, tadiavo ny tsiambaratelo sy ny tantaran'ny tantsaha, ary tsidiho ireo làlan'ny natiora sy farihy miovaova izay hita manerana ny ala Lullymore.
Misy ihany koa ny cafe sy fivarotana lehibe ahazoana fihinana eny an-toerana sy faritra piknikna maro ho an'ny sakafo any ivelany. Maimaimpoana ny fijanonana.
mpivadyVatosoa miafinaZavatra tokony hatao